पल र प्रदीप एक शब्द बोलेनन्, के दुश्मनी सुरु भएकै हो ? — Harpraharnews.com
पल र प्रदीप एक शब्द बोलेनन्, के दुश्मनी सुरु भएकै हो ?
बलिउडमा तीन खानको राज भनेझैँ अहिले नेपाली फिल्म क्षेत्रमा तीन अभिनेता अनमोल केसी, प्रदीप खड्का र पल शाहकै राज छ । यी तीन अभिनेतालाई एकअर्काको प्रतिस्पर्धीको रुपमा हेर्ने गरिन्छ ।
गएको महिना ‘एनएफडिसी अवार्ड’ मा अनमोल र प्रदीपको अंकमालले सिनेवृतलाई निकै तरंगित बनाएको थियो । यस्तै, प्रदीपले केही महिना अगाडि अभिनेता पलसँग मिडियामा पहिलो पटक सँगै अन्तर्वार्ता दिएका थिए ।
तर, प्रदीपसँगको पहिलो भेट पललाई त्यती फलिफाप नभएर अभिसाप जस्तै बन्न पुग्यो । एक सञ्चारमाध्यमलाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा ‘प्रदीप, अनमोल र आफू जस्ता केही स्टार अझै फिल्म क्षेत्रलाई खाँचो रहेको’ अभिव्यक्तिका कारण उनी मजाकको पात्र बन्न पुगे । उनी ट्रोलको शिकार भए ।
प्रदीपले भने उक्त अन्तर्वार्तामा सजकतापूर्वक आफ्नो कुरा व्यक्त गरेका थिए । अब, त्यसको असर यी दुई बिचको सम्बन्धमा झलकिन थालेको छ । शनिवार राजधानीमा भएको ‘सूर्य अवार्ड’ को मनोनयन सार्वजनिक कार्यक्रममा पल र प्रदीप दुवै उपस्थित भएका थिए । कार्यक्रममा प्रदीपभन्दा पल निकै ढिला पुगेका थिए । मनोनयन पत्र वितरण समारोहमा प्रवेश गरेसँगै पलले चिनेका अधिकांश चलचित्रकर्मीसँग हात मिलाए र अंकमाल गरे । तर, प्रदीप भने छुटे ।
त्यहीबेला रंग पत्रकार दिनेश सिटौलाले पललाई प्रदीपसँग फोटो खिचाउन अनुरोध गरे । तुरुन्तै, दुईबीच केही कानेखुसी भयो । स्पष्ट नसुनिएपनि अन्तर्वार्ता चाँहि सँगै नदिने शर्तमा फोटो खिच्न तयार भएको पलको हाउभाउबाट बुझ्न सकिन्थ्यो । नजिकै प्रदीप भने केही चलचित्रकर्मीसँग कफिको चुस्किसँगै गफमा मस्त थिए । पत्रकारहरुले प्रदिपलाई पनि पलसँग फोटो खिच्न आग्रह गरे । उनले उक्त प्रस्ताव सहजै स्विकार गर्दै मिडियाको क्यामेरा अगाडि उभिए । पलले प्रदीपको बायाँ छेउ च्यापे र फोटो खिचाए ।
रोचक कुरा त यो छ कि- यी दुईले न हात मिलाए न त अंकमाल नै गरे । करीब १ मिनेट दर्जनौं क्यामेराका अगाडि एउटै पोजमा तश्बिर खिचाए र दुवै एक शब्द नबोलि चुपचाप आ–आफ्नै सुरमा लागे ।
‘सूर्य अवार्ड’ को उत्कृष्ट ५ मनोनयन सार्वजनिक कार्यक्रम २ घण्टासम्म राजधानीको पाँचतारे होटल र्‍याडिसनमा भएको थियो । उक्त अवधिमा यी दुई फेरि आमने-सामने पनि भएनन् । प्रदीप निर्देशक सुदर्शन थापासँग अन्तिम रोहको कुर्सीमा बसेका थिए भने पल लोकगायक नविन पौडेललको साथमा थिए ।
एक अन्तर्वार्ताले के पल र प्रदीपको सम्बन्धमा दरार ल्याएको हो त ? आफू ट्रोलको शिकार हुँदा एक शब्द नबोली चुपचाप रहेको प्रदीपबाट पलले कतै दूरी त बनाइरहेको होईन ? एउटै कार्यक्रममा भेट हुँदा पनि तर बोलचाल नहुनुले यस्ता अनेकौ प्रश्नलाई जन्म दिएको छ ।
अर्जेन्टिनाको विश्वकप यात्रा संकटमा !
‘पैसामुखी भएको’ आरोप बारे अनमोलले मुख खोले